Top 3 Anyanwụ mehiere nke Solar Installers - Kimroy Bailey Group
N'ime afọ ise nke anwụ anwụrụala, emehiela m ọtụtụ anyanwụ n'okporo ụzọ m na-aga ịmalite azụmahịa ịwụnye anyanwụ na Kimroy Bailey Renewables. Achọrọ m inyere gị aka imeri usoro mmụta ọsọ ọsọ karịa m mere ọ bụ ya mere anyị ji kee Nzọụkwụ Mbara Igwe Solar Installation Training Course iji nyere gị aka iji obi ike ịwụnye sistemụ anwụ anwụ bara uru. N'isiokwu a, m ga-akọwapụta ụzọ atọ Rookie anyanwụ mehiere installers na-eme n'oge mmalite nke azụmaahịa ha.
Anyanwụ nke njehie # 1: vinghapụ Ego na tebụl
Mgbe ị na-eme mkpọtụ na azụmazụ ngwa ahịa nke anyanwụ ị nwara ịnye ndị ahịa ọnụahịa dị ọnụ ala karịa iji merie ọrụ karịa ndị asọmpi gị. Agbanyeghị, ka afọ 5 gachara azụmahịa ahụ, apụrụ m ịgwa gị nke a na - arụ ọrụ n'ime obere oge. Agaghị m akụ gị maka ime ya iji nweta ụkwụ n'ọnụ ụzọ, mana ọ bụghị ụzọ na-adịgide adịgide iji bulie azụmahịa gị.
You kwesịrị ịdịrịrịrịrị onye ahịa gị ihe ọma mana ị ga-agbado mbọ hụ na nhụmaahịa ahịa gị nwere nha anya ịkwado ọrụ azụmaahịa gị. Emechaala ọtụtụ nrụnye ebe m nwere ịchụ àjà iji kwụọ ụgwọ onwe m iji kpuchie ndị ọrụ na mmefu arụmọrụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na onye ahịa gị na-akwụ gị ụgwọ maka ụgwọ abụọ, hụ na nkeji nke mbụ ezuola iji kpuchie ọnụ ahịa akụrụngwa, ihe akụrụngwa na ntinye ikpeazụ ga-enye aka maka ọrụ na uru / ụgwọ arụmọrụ azụmahịa. Nke a na-arụ ọrụ ruru ihe dịka 70% maka nkeji nkeji mbụ yana 30% maka nkeji ikpeazụ. Customersfọdụ ndị ahịa nwere ike isi ọnwụ na 50% nke mbụ ya na 50% ka emechara ya, yabụ gbaa mbọ hụ na ị nwere ngwongwo zuru oke nke ihe ndị dị na mbara igwe ma ọ bụ nweta isi obodo iji nweta ihe ndị akwụghị na ntinye ugwo maka ntinye nke mbu n'ihi na eleghi anya na 50% ga - ekpuchi ngwa ọrụ gị niile, ihe akụrụngwa na ọrụ.
Anwụ nke na-emebi iwu # 2: Imeri ma ọ bụ mee atụmanya na-enweghị isi n’ebe ndị ahịa nọ
Ga-ezute ọtụtụ ndị ahịa chọrọ mgbịrịgba na whistles niile mana ha enweghị ego ahụ. Ọrụ gị na ọnọdụ a bụ ka ọ pụta ìhè nke ọma na nkwukọrịta gị na ndị ahịa banyere ike sistemụ ike anyanwụ. Kedu ihe m bu n'uche? M ga-enye gị otu ọmụmaatụ: size tokọlatara sistemụ nwepu ihe na-ehichapu ya na ngwa kWh nwere. N'etiti oru, onye ahia a buliri goro ahihia buru ibu na igwe ocha na olile anya na sistemụ gi g’enwe ike ibunye ya dika ego ekwenyero. Ma ọ bụ ozugbo ị rụchara ọrụ ma i nyela ngwa ọrụ elektrik niile ngwa ndị a, anyanwụ na-abịa, onye ahịa na-ewe onye ọrụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ enyi iji kekọta ngwa ọrụ ndị ọzọ na sistemụ.
Isi okwu m bụ ime ka ọ pụta ìhè ma hụ na ị nwere ihe nnabata niile na mgbanwe ọ bụla ndị ahịa rịọrọ ka edere ede site na nkwenye n’eluigwe, nkwekọrịta a bịanyere aka na ya, mkparịta ụka email na facebook wdg.
Anyanwụ njehie # 3: Atụmatụ na-adịghị mma
Dịka ọhụụ na azụmaahịa ngwa nrụnye, ebumnuche gị bụ ka ị rụọ ọrụ nke ọma dịka enwere ike na obere ego ị nwere. Isi akụkụ ịchọrọ inwe ihu ọma bụ otu ndị ọrụ otu (ma ọ bụ ọgbakọ abụọ ma ọ bụ karịa) - onye na-elekọta ya? Mpaghara ozo bu ntinye na ikpuputa ihe nke ihe ndi ozo di n’igwe ma obu ihe ndi ozo di nma buru ibu, na-enwe onwa ndi a ubochi tupu nkwalite n’ezie enyere aka. N'ikpeazụ ịnwe ngwaọrụ eji arụ ọrụ kwesịrị ekwesị dị ka okpu ike, njikota, eriri akụrụngwa, akụrụngwa, hydrometer wdg.
Pịa Kweta na untkwụ Ego 54% na Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe
Otu olu m ga-amasị inye ma na m na-eji azụmaahịa m bụ na m ga-ekpokọta ihe ndị mejupụtara anyanwụ. Anyanwụ dị ka inverter, onye na-ahụ maka ebubo, igbe njikọ DC (nke dị ugbu a), ndị na-ahụ maka sekit na ndị na-ahụ maka nchekwa na-ejikọ aka n'ọfịs tupu ịpụ n'ụlọ ụlọ onye ahịa. Ana m etinye ihe ndị a na - arụ ọrụ n'ime igbe dị mma nke enwere ike ịfecha mgbidi na ngwa ngwa. Achọpụtakwala m na ọ na-abụkarị, onye nwe ụlọ nwere ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ na-arụ n’ụlọ ha mgbe ha na-atụle maka anyanwụ. Ọ bụrụ n’ọrụ eletriki na-arụ n’otu oge ekwere gị ụgwọ iji wụnye anyanwụ, mee ka onye ọkụ eletrik jiri eriri ha rụọ ọrụ gị. Ehee, ha ga-eme elele ma ọ bụ na - ejighị ya n’ọkụ.
Enwere m obi uto mgbe m nwere ike ịkekọrịta ụmụ akwụkwọ anyị echiche na ndụmọdụ ndị a na atkwụ na larkwụ Solar. Ndụmọdụ dị mma na-ekwu. ”ọ bụrụ na gị na ndị maara ihe na-agba ọsọ, ị ga-ama ihe. Dịka mọzụlụ, a ga m amụrụ ọtụtụ nkuzi site na ahụmịhe siri ike karị ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ nchekwa ọkụ ka bụ nwata na enweghị usoro. Can nwere ike ị nweta ọdịnaya dị oke egwu karịa n'ụdị vidiyo mgbe ịdebanye aha maka Nzọụkwụ Mbara Igwe nwụnye Nkụzi Ọzụzụ. Usoro ihe omume a ga - agba mbọ hụ na ị gafere ihe mgbochi nke nnwale na njehie wee banye n'akụkụ dị mma nke iji nkwenye wụnye sistemụ ike anyanwụ bara uru.
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ akụkọ a. Biko nweere onwe gị ịkọrọ echiche gị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Nke a bụ #TeamKB Ka anyị #KeepBelieving
Asọmpi UTech Robotics, 2011
Ndi ndu na-ele ndi ndu anya. Onwe m eche na otu n’ime ndị isi kacha oge niile bụ… GỤKWUO
Ọ Bụrụ ihe mmụta banyere ịdị ndụ mmadụ. Site na nzere injinia si Mahadum Nkà na ụzụ (UTech), Kimroy Bailey… GỤKWUO